Usayizi 24.43 MB
Play 18 691
Zadalwa 02-07-2012 16: 46: 06
Kushintshwe 29-08-2013 01: 57: 07
Umbhali: Ivan Jurcaga - Peter Priskin - Kendy Schwarz http://migsim.ic.cz
Lokhu add-on kulabo abathanda sekulingisa hardcore, uqonde ukuthi ukuthi awukwazi ukuqala izinjini ngaphandle kokuqale ufunde futhi eqonda manual. Ngokusobala ukulanda uma ungeyena uzimisele ukudela ukuba baqonde okusebenza ngayo. Izinqubo isengezo izici abanikeze asebenza nabo ncamashí nalabo of a real MIG-21 MF. Lokhu pack kuhlanganisa imisindvo 100% kwangempela, repaints xaxa VC enhle. I model yangaphandle futhi kwenziwe kahle ngokwedlulele. Ngoba FSX-SP2 noma Ukusheshisa.
Ngoba take-off kungcono ukuba omunye ezingeni ichopho futhi ngombala esiphezulu.
Leli bhukwana yayihlanganisa kule pack ngolimi lwesiCzech, Nokho, Rikoooo itholé omunye eyahunyushwa Lukasz Kacprzykowski. Download it ngezansi
I Mikoyan-Gurevich MIG-21 kuyinto Soviet fighter jet futhi aziwa NATO ikhodi Fishbed. Lona jet umkhiqizo sonke isikhathi, kanye kuka 11,000 amakhophi.
enamandla kakhulu futhi beshesha, MIG-21 Nokho esingeside kakhulu empini futhi kutholakale izinsiza zobuchwepheshe ukuze kwemikhumbi, okwenza kube "indiza pilot", the imiphumela ixhomeke kakhulu amakhono combat wabo. Naphezu nobuthaka bayo, kuthandwa kakhulu: izindleko ngobuhle ongaphakeme kuye kwasenza amabutho amaningi air ukuba fighter yabo yokuqala leSupersonic.
Video kusukela Fox 4 ilungu Rikoooo
Qala phezulu Inqubo
izinqubo Basic ezindizayo
video Amateur for qalisa izinjini kanye Air Show (real)
Isiqophi: 10 imizuzu of happyness (real)
MIG-21MF FSX & P3D Thwebula
Incazelo 40 876
Incazelo 35 462
Incazelo 19 653
Incazelo 11 284
Incazelo 9 428
Incazelo 41 296
Incazelo 17 131
Incazelo 20 634